के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / के राति सुत्दा मुखबाट र्‍याल चुहिन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो बिमारीको संकेत !
admin October 31, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 225 Views
नाक बन्द भएमा : चिसोका कारण नाक बन्द भएमा पनि मुखबाट र्‍याल निस्कन सक्छ । विशेषगरी नाक बन्द भएमा नाकले सही तरीकाले सास लिन सक्दैन र मुखबाट सास लिनु परेको कारण सुत्दा खेर मुखबाट धेरै र्‍याल निस्कने गर्छ ।
सुत्ने पोजिसन नमिलेमा : सुत्ने पोजिसन नमिलेमा गलत तरीकाले सुतेमा पनि मुखबाट र्‍याल निस्कन सक्छ । विशेषगरी, घोप्टो परेर सुतेमा वा लामो समय एउटै पोजिसनमा सुतेमा पनि मुखबाट र्‍याल निस्कन सक्छ ।
औषधीको दुष्प्रभाव : केही औषधीहरुमा यस्ता तत्वहरु पाइन्छ, जसका कारण मुखबाट र्‍याल निस्कन सक्छ । अल्जाइमरको समस्या भएका व्यक्तिको मुखबाट समेत र्‍याल निस्कन सक्छ।
स्लीप एप्निया : जब शरीरले रातको समयमा सही तरीकाले सास लिनमा असमर्थता जनाउँछ वा सुत्ने समयमा मानिस बढी तनावमा हुन्छ, त्यतिबेला उसले मुखबाट र्‍याल निकाल्ने गर्छ।
मिठो तथा तातो खानेकुरा : मिठो तथा तातो खानेकुराका कारण पनि मुखबाट र्‍याल निस्कन सक्छ । कयौपटक धेरै गुलियो, अमिलो तथा तातो खानेकुरा खानाले पनि र्‍यालको ग्रन्थी ड्यामेज भई उक्त ग्रन्थीबाट धेरै पानी बग्न थाल्छ, र मुखबाट र्‍याल निस्कन थाल्छ ।
एलर्जीको समस्या : शरीरमा कुनै कुराको एलर्जी भएमा पनि र्‍याल निस्कन सक्छ । यदी कुनै मानिसलाई नाक वा मुख सम्बन्धि एलर्जी भएमा उसको मुखबाट धेरै र्‍याल निस्कने समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । कसैलाई रुघाखोकी बढी भएमा पनि मुखबाट र्‍याल निस्कने समस्या उत्पन्न हुनसक्छ ।
एसिडिटी : अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार एसिडिटीको समस्याका कारण पनि मुखबाट धेरै र्‍याल बग्ने गर्छ । खासगरी एसिड रिप्लेक्स एपिसोडका कार ण पेटमा एसिडिटी हुने गर्छ । जसका कारण अन्ननलीमा एसिडिटी भरिएर र्‍याल उत्पन्न हुने गर्छ । त्यसैले, एसिडिटीका कारण र्‍याल बग्न थालेमा तुरुन्तै उपचार गर्न जरुरी छ ।
र्‍याल ग्रन्थी सुन्निनु : र्‍याल ग्रन्थीमा कुनै किसिमको समस्या भएमा पनि र्‍याल ग्रन्थी खराब हुनसक्छ । जसका कारण उक्त ग्रन्थीमा अधिक र्‍याल जम्मा भई मुखमा पानी बग्ने गर्छ ।
मुखबाट र्‍याल निस्कन नदिने केही घरेलु उपाय :
-सुत्नु भन्दा पहिले एक गिलास पानी पिउने र केही टुक्रा कागती मुखमा राख्नाले पनि मुखबाट र्‍याल निस्कने समस्या कम हुनसक्छ । -पिठ्युतिर फर्केर सुतेमा पनि र्‍याल आउन बन्द हुन्छ। -चिसोका कारण नाक बन्द भएमा वाफ लिएमा यसले नाकबाट सास लिन सहायता प्रदान गर्छ। जसका कारण मुखबाट र्‍याल निस्कने समस्या स्वत कम हुनथाल्छ।
Previous डिभोर्स गरिसकेकी पत्नीसंग सम्बन्ध बनाउन यी श्रीमानले जे गरे त्यो कसैले सोच्नै सक्दैनन !
Next हात खुट्टा झमझमाउने र निदाउने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्तो खराबी